သနပ်ခါးမေ: ဗိုက်ချပ်စေမည့် 10 မိနစ်စာ လေ့ကျင့်ခန်း
ပွင့် July 25, 2011 at 10:46 AM
ငါ့ညီမလေး အကြားအမြင်များ ရနေလား မသိဘူး.. ကွက်တိပဲ
မြတ်ကြည် July 25, 2011 at 4:21 PM
မမပွင့် နဲ့ စိတ်ချင်းဆက် နေတာလား မသိ :)
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) August 11, 2011 at 6:39 AM
မြတ်ကြည် August 15, 2011 at 2:48 AM
မချော ကျေးဇူး နော်။ ဟိုတလောက အစ်မရဲ့ဆိုက် ဝင်တာ ဝင်မရပြန်ဘူး။
မြတ်ကြည် August 24, 2011 at 4:34 PM
ဗိုက်ခွဲထားရင် က ၁ နှစ်ကျော်မှာ ချုပ်ရိုး scar အသားကျပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပုံမှန်နဲ့ ကွာတာမို့ တတ်နိုင်ရင် ဝမ်းဗိုက်အတွင်းဖိအား intra abdominal pressure မတက်စေနိုင်မယ့်လေ့ကျင့်ခန်း မျိုးရွေးလုပ်စေချင်ပါတယ်။ ရှာပြီးတင်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်။
Anonymous August 26, 2011 at 8:02 PM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. စောင်.ဖတ်ပါမယ်.. အမြဲအားပေးပါတယ်..
Anonymous August 27, 2011 at 12:36 AM
hi sister, i like your all post .please let me share.thanks
မြတ်ကြည် October 14, 2011 at 5:02 AM
Thank you for the comment. :) you can share, with the name of the site under the article.
puupuu December 15, 2011 at 5:57 PM
ငပူးအခုတလော ဗိုက်ပူလာသလို ပဲခံစားရတယ်
ကျေးဇူးပါ မြတ်ကြည် .........ရေ
မြတ်ကြည် December 16, 2011 at 4:21 AM
မမပူးရယ်၊ မြင်ရသလောက်က မဝပါဘူး။ အစ်မပူးဝတယ်ဆိုရင် မြတ်ကြည်တော့ ဘုတ်အီး ဖြစ်နေပြီ။ :)
nilarkoko February 1, 2012 at 12:04 AM
မြတ်ကြည်ပြောသလိုလုပ်ကြည့်အုံးမယ်. အမက ဗိုက်ပူတာကိုသိပ်မုန်းတာ.မိန်းမတွေဗိုက်ပူရင် သိပ်ရုပ်ဆိုးတယ်နော်.အ၀တ်အစားဝတ်ရတာ လဲအဆင်မပြေတော့ဘူး.ကျေးဇူးပါညီမလေးရယ်
lin February 5, 2012 at 6:09 PM
မမြတ်ကြည်ရေ...ယောင်္ကျားလေးတွေရော လုပ်လို့ရလားဗျ....အနော်လဲ ဗိုက်ပူလို့....အဟဲ...
မြတ်ကြည် February 5, 2012 at 6:45 PM